Al-Shabaab oo xubno sare looga dilay dagaal | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxdan ayaa mudooyinkii dambe la kulmeysay guuldarooyinka dhanka dagaalka ay kula jirta Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Mareykanka uu tababaray ee DANAB ayaa howlgallo militeri ka fuliyay qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose, oo ay ku xoog badan tahay Kooxda Al-Shabaab.
Taliyaha Guutada 16aad ee DANAB Xasan Maxamed Cismaan ayaa sheegay in 8 xubnood oo Saraakiil ay kamid yihiin in Al-Shabaab uga dileen dagaallo ka dhacay duleedka Janaale iyo Wanlaweyne, iyadoo howlgalka lagu soo furtay hub iyo saanad Ciidan.
Duleedka Janaale, gaar ahaan Ugunji iyo Buslay waxaa lagu dilay 7 xubin oo kamid ahaa Al-Shabaab halka Tuulada Caliyow Barrow oo hoostagta Wanlaweyn lagu khaarijiyay horjooge lagu magacaabi jiray Nuux Dhag oo u qaabilsanaa Al-Shabaab canshuuraha.
Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in degaannadii uu howlgalka ka dhacay inay la wareegeen Ciidanka DANAB, waxayna dharbaaxo kale ku noqonaysaa Al-Shaaab oo mudooyinkii dambe guuldarooyin kala kulmeysay dagaalka ka socda Koonfurta.
Ciidanka DF oo garab ka helaya AMISOM ayaa isku dayaya inay dib ula wareegeen goobaha Al-Shabaab uga sugan tahay gobollada ay doorashooyinka ka dhacayaan, laga soo billaabo Mudug illaa Jubadda Hoose.